Inkokhelo yokulethwa kwezimbali.
Namuhla kunezindlela ezimbili zokukhokha ezitholakalayo zoku-oda izimbali:
1. Amakhadi asebhange
Ungakhokha nge-VISA, VisaElectron, MasterCard, Maestro, amakhadi we-MIR, futhi ngokungeziwe, ngamakhadi wezinhlelo zokukhokha zomhlaba wonke - i-VisaInternational, MasterCardInternational, DinersClubInternational, AmericanExpress.
I-interface interface yokukhokha ilula futhi inembile:
Ukukhokha ngamakhadi kwenziwa ngohlelo lokukhokha oluzenzakalelayo "CloudPayments". Kungakapheli imizuzu eyishumi unganqaba ukukhokhela i-oda. Uma isikhathi sidlulile, futhi awukenzi isinqumo nge-oda, lapho-ke isicelo sizokhanselwa.
Isitifiketi Sokuthobela i-PCIDSS "CloudPayments":
Ngaphandle kokuphambuka kuzidingo zezinhlelo zokukhokha zomhlaba wonke, ukuze kwandiswe izinga lokuphepha, kusetshenziswa ubuchwepheshe bamuva - i-3D Secure / SecureCode. Ugcwalisa ifomu, uqinisekise inkokhelo yakho usebenzisa inkinobho ekhethekile bese ufaka ikhodi oyitholile evela kwi-SMS emkhakheni ofanele. Unganqatshwa ukukhokha kuphela uma ibhange lakho lingenaso isitifiketi sokusebenzisa lobu buchwepheshe.
Uma ufuna ukuthola imininingwane eningiliziwe mayelana nokukhokha ama-oda ngekhadi lakho kwi-Intanethi, ukuxazulula izinkinga ngokukhokha, shayela insizakalo yokusekela yasebhange enombolweni ekhonjiswe ekhadini.
2. Izinkokhelo ezingenayo imali ezinhlanganweni ezisemthethweni
Izinhlangano zomthetho zikhokhela ama-oda avela ku-akhawunti yamanje, ngokuya ngama-invoice akhishwe uhlelo.
Ukwamukela i-invoyisi yokukhokha, lapho ufaka i-oda, khetha indlela yokukhokha yezinhlangano ezisemthethweni bese ufaka imininingwane yenhlangano yakho ngendlela emfushane futhi uhlelo luzothumela i-invoyisi ekhiqizwe ngokuzenzakalela kukheli le-imeyili elicacisiwe:
Ngemuva kokuthola inkokhelo, uzothola i-SMS, i-imeyili kanye nesaziso ku-akhawunti yakho siqu sokuthi i-oda selisetshenzisiwe.